Online Hartha - Page 190 of 199 - News and Entertainment
May 2, 2020 by Online Hartha
အမျိူးသားထုကြီးကို ဟာခနဲ ဟင်ခနဲဖြစ်သွားစေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဗွီဒီယို… အမျိုးသားပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က က အခုချိန်ထိတိုင် တစ်နေ့တစ်ခြား အလှတွေတိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အိမ်ထောင်ရေးကို မစဉ်းစားသေးပဲ တစ်ကိုယ်တည်းအပျိုကြီးအဖြစ် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Covid – 19 ရောဂါကြောင့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ရပ်နားထားရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အိမ်မှာနေပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရင်း Healthy Food တွေ စားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာနေပေမယ့် ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတင် ပိုလှလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သင်ဇာကတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ကျစ်လျစ်ပြီး ပိုလို့တောင် လှလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် သူမ ဒီနေ့ညနေပိုင်းတင်ထားတဲ့ … Read more
နှစ်နဲ့ချီပြီး ဆေးသောက်လာရတဲ့ သွားရောဂါ နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားတဲ့နည်း
ကြိုတင်ဝန်ခံပါရစေ။ ကျုပ်က ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။ ဝေတနာရှင်ဗျ။ ဒီလိုဗျ••၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကျုပ်အံသွားတစ်ချောင်းလှုတ်ပြီး မခံမရပ်ကိုက်လွန်းလို့ ဆရာဝန်သွားပြတယ်… ဆရာဝန်ကသွားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတော့ မနုတ်စေချင်ဘူး စားဆေးပေးပြီးထိန်းလိုက်တယ်။သက်သာသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သွားရဲ့ဘေးမှာဖုကလေးလိုဖြစ်ပြီးပြီတည်လာတယ်။ဆရာဝန်ထပ်ပြ ဆေးထပ်ပေး ဒီလိုနဲ့ပဲသံသရာလည်နေတာပေါ့။ ပြီတည်တဲ့အခါ သွားဖုံးတင်းပြီး နေထိုင်ရခက်ပေမယ့်ညှစ်ထုတ်လိုက်လို့ပြီထွက်သွားရင် တစ်ပါတ်လောက်နေထိုင်လို့ကောင်းသွားပြန်ရော။ ပြီးရင်ပြန်ထွက်။ဆေးကတော့ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်နေ့တိုင်းသောက်လာလိုက်တာ ၂၀၁၇မှ၂၀၁၉ခုနှစ်ခုချိန်ထိပဲ။ နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ နှစ်ချီကြာလာတော့ ကင်ဆာဘာညာလန့်လာင်္ပြီလေ။ရန်ကုန်ရောက်တော့ လှည်းတန်းသွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ဆက်ပြတယ်။ ဆရာဝန်က ဓါတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေး အဖြေက ကင်ဆာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ စိတ်အေးပြီမို့ဆက်ကုပေါ့။သက်သာသလိုရှိပေမယ့် အနာပြီထွက်တာတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ။ တင်းပြီလေ။ လူကခတ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့တွေ့သမျှ လမ်းဘေးအရွက်တွေခူး အရည်ထွက်အောင်ကြိတ် အနာထဲထည့်ပေါ့.. တမာရွက်တွေဝါး။ တမာခေါက်ငုံ။ ဆားရေငုံ မရပါဘူး။ တစ်နေ့ ဖုန်းပွတ်ရင်းကျောက်ချဉ်အာနိသင်အကြောင်းပင်စိမ်းရွက်နဲ့ သံပုရာသီးအကြောင်းရေးထားတာလေးတွေ့လို့ ဖတ်ကြည့်ရင်းအကြံပေါ်လာတာနဲ့ထုံးစံအတိုင်း စမ်းသတ်တာပေါ့။(သွားနဲ့ပါတ်သက်တာတော့မပါပါဘူး) အဲဒီမှာ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးတော့တာပဲဗျို့”တစ်ကယ်အံ့သြစရာပါ”နှစ်နဲ့ချီခံစားနေရတဲ့ရောဂါ နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း အစအနမကျန် … Read more
လေဖိအားနည်ရပ်ဝန်း ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်ကြာင်း မိုးဇလ ထုတ်ပြန်
လေဖိအားနည်ရပ်ဝန်း ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်ကြာင်း မိုးဇလ ထုတ်ပြန် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့ တောင်ပိုင်းတို့မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး နောက် ၇၂ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ် ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ မိုးဇလက ဒီနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မေ ၃ ရက်နေ့ မနက်အထိ ခန့်မှန်းချက်အရ မကွေးတိုင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ နေရာကွက်ကျား၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တို့မှာ နေရာကျဲကျဲ၊ ကျန်တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တို့မှာ နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်းရွာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပြီး လှိုင်းအမြင့် ၆ ပေမှ ၈ ပေခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ … Read more
ရက် (၂၀) ကျော်ပျောက်ဆုံးနေသည့် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန် ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာ…
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန် ပြုံးရွှင်နေ… မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်း ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို မနေ့ကတက်ရောက်တဲ့ ဓာတ်ပုံ ဒီနေ့ တောင်ကိုရီးယား သတင်းတွေထဲ ပါလာတယ်….။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်မ်ဂျုံအွန်ဟာ အိမ်တွင်း၂၀ ရက်အောင်းနေပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီ…။ ဒီနေ့ မနက် သတင်းထဲမှာ သူ ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပြသလိုက်တယ်..။ အလုပ်သမားနေ့မတိုင်မီ တစ်ရက်အလိုမှာ Suncheon ဓာတ်မြေသဩဇာစက်ရုံဆောက်လုပ်တာပြီးစီးသွားတာမို့ ကင်မ်က မေလ-၁ ရက်၊ မေဒေးနေ့မှာ ဖဲကြိုးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံထွက်လာတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်မ်ဂျုံအွန် အကြောင်း..။ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရမီဒီယာတွေက ကင်မ်ဂျုံအန်းရဲ့ မွေးနေ့ဟာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တဲ့..။ တချို့က ၁၉၈၃ခုနှစ်၊တချို့က ၁၉၈၄ခုနှစ်တဲ့..။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်မ်ဟာ မောင်နှမ သုံးယောက်အနက် ဒုတိယမြောက်ပေါ့..။ သူ့အစ်ကို … Read more
အမီးရ်ခန်း နှင့် ဂျုံမုန့်ထုပ် လေးများ…Suprise
🌎 အမီးရ်ခန်း နှင့် ဂျုံမုန့်ထုပ် Suprise လေးများ… Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အမီးရ်ခန်းက ဒေလီမြို့ပေါ်မှ အ ခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဂျုံအိပ်တွေများစွာထုတ်ပိုးထားပြီးလာယူစေခဲ့ပါတယ်… အချို့တွေက”ဒီလောက်ချမ်းသာတာဂျုံမုန့်ပဲပေးစရာလားတဲ့? ! ဒါကြောင့်သွားမယူခဲ့ကြသူတွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုကတော့…… အတော်လေးကို ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့ သွားယူပြီးအိမ် ပြန်ရောက်လို့ မုန့်လုပ်ဖို့အိပ်ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ (အိပ်ထဲမှဂျုံမုန့်အကြား) ရူပီး ၁၀၀၀၀(နှစ်သိန်းခန့်) သေချာစွာထည့်ထားပေးတာကိုဂျုံအိပ်သွား ယူသူတွေရရှိသွားခဲ့ပါတယ် !🌎 ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာလဲမေးတော့ “တကယ်ကိုလိုအပ်သူတွေရ စေချင်တာပါတဲ့ ! (Shan) unicode 🌎 အမီးရျခနျး နှငျ့ ဂြုံမုနျ့ထုပျ Suprise လေးမြား… Bollywood ရုပျရှငျမငျးသားကွီး အမီးရျခနျးက ဒလေီမွို့ပျေါမှ အ ခကျခဲရှိတဲ့သူတှအေတှကျဂြုံအိပျတှမြေားစှာထုတျပိုးထားပွီးလာယူစခေဲ့ပါတယျ… အခြို့တှကေ”ဒီလောကျခမျြးသာတာဂြုံမုနျ့ပဲပေးစရာလားတဲ့? ! ဒါကွောငျ့သှားမယူခဲ့ကွသူတှလေညျးမြားစှာရှိခဲ့ပါတယျ ။ စိတျဝငျစားစရာလေးတဈခုကတော့…… အတျောလေးကို ဒုက်ခရောကျနတေဲ့သူတှကေတော့ သှားယူပွီးအိမျ ပွနျရောကျလို့ … Read more
အကြီးဆုံးသမီးကို ချစ်မိပီဆိုရင် ခင်ဗျားဒါတွေသိထားပါ
အကြီးဆုံး သမီးကို ချစ်မိပီ ဆိုရင် ခင်ဗျားသေဖို့ပြင်ထား အိမ်မှာ အလို လိုက်မခံ ရသမျှ အလျှော့ပေးရသမျှဒေ ခင်ဗျား ဆီက အကုန် ယူ လိမ့် မယ်… အကြီးဆုံးပီပီ ဆရာ လုပ်မယ် ဗိုလ်ကျမယ် အနိုင်ယူမယ် အလိုက်ကန်း ဆိုးမသိ ပူဆာမယ်…. ဘယ်အရာ မဆို ဦးစားပေးမှ ကြိုက်မယ် သက်ဦး အရူးဆို သလိုပဲ ငိုမယ် ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ရယ်မယ်… အကောင်းကြီး ကနေ ရုတ်တရက် ဆူ ပူ မယ်… ရန်ဖြစ် ရင်လည်း မောင်ဒေ သဲဒေ ပျောက် နင်ဒေ ငါဒေ တခြား နာမ်စားဒေ နဲ့ ခက် ထန် လာ မယ်… … Read more
“ကလေးတွေကို ကိုဗစ်က မျက်စိထဲမထည့်ပါ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို ဒုက္ခမပေးပါ” ကလေးများနှင့် ကိုဗစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ ၂၉-၄-၂၀၂၀ နေ့ကလုပ်တဲ့ Media Conference မှာ ကလေးတွေနဲ့ ကိုဗစ်အကြောင်း မေးခွန်းမေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်.. ဒါနဲ့ ကိုယ်လဲစိတ်ဝင်စားလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာတွေထဲက ကလေးတွေဘယ်နှစ်ယောက်များ ပါနေသလဲကို စေ့ငုကြည့်တဲ့အခါ ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်… ယနေ့အချိန်ထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုစုစုပေါင်းလူနာ ၁၅၁ ဦးအနက် ကလေးလူနာ ၁၂ နှစ်အောက် ၅ ဦးပဲ ရှိပါတယ်.. အသက် ၁-၅ တစ်ဦး အသက် ၅-၁၀ လေးဦး စုစုပေါင်း ၅ ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် စုစုပေါင်းဖြစိပွားမှုရဲ့ ၃.၃ ရာနှုန်းရှိပါတယ်.. အသက်အငယ်ဆုံးကလေးဟာ တစ်နှစ်ခြောက်လဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကလေး ၅ ဦးလုံးဟာ စောင့်ကြည့်လူနာတွေ … Read more
သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ် မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ?
သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ် မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ… လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေ လိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေလည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာ ပညာတတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ြ့ပီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး….. ကံကြမ္မာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော် တို့တွေ အခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပုံမှန် ဆိုရင်တော့ သာမန်လူတစ်ယောက် မှာ လက်ကောက်ဝတ် မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်းရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုလမ်းကြောင်းတွေကတော့ လမ်းကြောင်း ၁ အပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းထင်ရှားပြီး တစ်ဆက်တည်းရှိမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းက တကယ်လို့ မှိန်းဖျော့နေမယ်၊ အပြတ်တွေများနေမယ် … Read more
“အိမ်မှာ အထိအခိုက်တခုခု မရှိရအောင် ပဋ္ဌာန်းရွတ်တိုင်း ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ”
“အိမ်မှာ အထိအခိုက်တခုခု မရှိရအောင် ပဋ္ဌာန်းရွတ်တိုင်း ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ” ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် မိသားစုမှာ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ဖြစ်တယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဘူး၊ စီးပွားရေးကျတယ်၊ လင်မယား ရန်ဖြစ်တယ်၊ သားသမီးတွေ ဆုံးမရတာ မလွယ်ဘူး၊ အိမ်မှာ ရွတ်လို့မရဘူး အိမ်စောင့်နတ် မခံနိုင်ဘူး၊ ဘုရားမှာရွတ်တယ်၊ အသံတွေကြားရတယ်၊ အရိပ်တွေမြင်ရတယ်၊ ပြီးအောင်ရွတ်လို့ မရဘူး အနှောက်အယှက်တွေများတယ်၊ စသည်ဖြင့် ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် အဆင်မပြေသူများအတွက် ဒီနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နတ်ပင့်ရပါမယ်။ သမန္တာ စက္ကဝါဠေသု၊ အတြာဂစ္ဆန္တု ဒေဝတာ။ သဒ္ဓမ္မံ မုနိရာဇဿ၊ သုဏန္တု သဂ္ဂမောက္ခဒံ။(ဓမ္မဿဝနကာလော အယံ ဘဒန္တာ။) ၃ခေါက် ဒုတိယက မေတ္တာသုတ် ရွတ်ရပါမယ်။ တတိယက ခွင့်တောင်းရပါမယ်။ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ ဂုဏ်တော်အနန္တ၊ ကံတော်အနန္တ၊ ဉာဏ်တော်အနန္တ၊ တန်ခိုးတော်အနန္တ၊ … Read more